स्वास्थ्य नीतिमा समस्या कि नियतमा खोट ? - निरन्तरखबर
२०७८ बैशाख २९, बुधबार , निरन्तरखबर , १६३६ पटक पढिएको
डा. सुनिल कुमार शर्मा
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार जिल्लाभित्र भएका डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका प्रमुखसँग गरेको छलफलमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी, काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको ‘हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स’ भएको तीतो सत्य बोलेपछि उहाँलाई सार्वजनिक रुपमै धन्यवाद नदिइरहन सकिन । सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेका अस्पतालले संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन नसकेको, अस्पतालमा बेड संख्या बढाउने कार्य भाषणमा मात्रै सीमित भएको र जिम्मेवार निकायले दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण कोभिड संक्रमित लगायत समग्र स्वास्थ्य उपचारको स्थिति जटिल बनेको विषयलाई तपाईंले साहसका साथ उठाउनु भएको छ । सोमवार संसदको रोष्ट्रममै उभिएर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत २८ हजार बेड मौजुदा रहेको बताउनु भएको थियो ।
हामीले यो कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका हौं । हामीले उठाएका यी कुरालाई नकारात्मक रुपमा लिइयो । हो, हामीले राज्यको नीतिको परिधिमा रहेर व्यवसाय गरेका छौं । व्यवसाय गर्नु अपराधकर्म हो र ? पहिलो त हामी यो देशका सचेत र जिम्मेवार नागरिक हौं, त्यसपछि मात्र हामी अरु हौं । यो देश राम्रो बन्दा त्यसको लाभ हामीले पनि पाउँछौ । देश विग्रदा हामी पनि विग्रन्छौ । यो कहाली लाग्दो अवस्थामा जोखिम मोलेर निजी अस्पतालहरुले गरेको सकारात्मक भूमिकाको यथेष्ट कदर भएको छैन । बरु उल्टो नकारात्मक टिप्पणीहरु भएका छन् ।
उपचारका लागि नीति परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तपाईंले ७० वर्ष भन्दा माथिका संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा नराख्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाका बारेमा बताएनु भएको छ । यो कति गम्भीर छ ? तपाईं, हामी नै त्यो उमेरमा पुग्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले हामी समवेदनशील नबनौंला तर हाम्रै आँखा अगाडि तपाईं हाम्रै ७० नाघेका आमा, बा, जो छटपटाइरहेका बेलामा, जसलाई भेण्टिलेटरमा लगे बाँच्छन कि भनेर आशा गर्दागर्दै उमेरको सीमाका कारण बचाउने अन्तिम प्रयास नगरी आर्यघाटतिर लैजाने ?
श्रद्देय कार्यकारी निर्देशक ज्यू, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली कोभिडको यो महामारीका कारणले मात्र कोल्याप्स भएको होइन । यसले त यतिवेला हाम्रो यथार्थ अवस्थालाई सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने गरी सतहमा ल्याएको मात्र हो । राज्यको नीतिमा टेकेर अन्य क्षेत्रमा जसरी कामहरु भएका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँबाट नै सहयोग भएन, किन ? बरु उल्टो छेकवार भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलिया, सिण्डिकेटधारीहरुले अनेक बहानामा बखेडा झिक्ने, राज्यले तिनीहरुसँग नै झुकेर ठूलो आर्थिक लगानी गरेका व्यवसायीहरुलाई ‘अपराधी’, ‘माफिया’ को पगरी गुथाएर लखेटिरहने ? स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट राज्यको नीति, नियमलाई मानेर काठमाडौंसहित देशभरि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएको भए के विग्रन्थ्यो ? वीर अस्पतालसहित सरकारी अस्पतालको दुरावस्थाका बारेमा मात्र कुरा उठाउनु भएको छैन, तपाईंले सिङ्गो नेपालको ‘हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स’ भएको स्वीकार्नुभएको छ । उपचारका नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिलेको कहालीलाग्दो अवस्थाको तपाईंको चित्रणले धेरैलाई गम्भीर नै बनाएको हुनुपर्छ ।
( लेखक डा.शर्मा काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल काठमाडौंका कार्यकारी अध्यक्ष तथा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालकसमेत हुन् ।)
कोरोनाले बेलबारीकी एक महिलाको मृत्यु : दोस्रो लहर सुरु भएयता २ जनाको ज्यान गयो